भनेकै समयमा ग’र्भ बस्नको लागि यो समयमा यौ’न सम्पर्क गर्नुपर्छ : डा. सबिना सिम्खडा – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुण १४, २०७७ समय: २१:५८:४४
काठमाडौं / नेपालमा पछिल्लो समय बाँझोपन एक जटिल समस्याको रुपमा देखिएको छ । यसमा महिला र पुरुष दुबैको गल्ती हुने जानकारहरु बताउँछन । लामो समय देखि डा. सबिना सिम्खडा यस क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेकी छिन् । उनले बात्सल्या आईभिएफ फर्टिलिटी सेन्टर खोलेको करिब तीन बर्ष भयो ।